Baarlamanka federaalka oo sheegay in ay meel-mariyeen howlo muhiim u ah dalka sanad kadib – Radio Daljir
Agoosto 21, 2013 4:28 b 0
Muqdisho, August 21, 2013 – Gudoomiyaha Baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, ayaa shaaca ka qaaday in ay golaha shacabka ay u hir-galeen shaqooyin badan oo muhiim u ah howlaha shaqo ee dowladda.
Wuxuu sheegay in ay jiraan talaabooyin muhiim u ahaa baarlamanka dalka Soomaaliya iyo shaqooyinka maalin laha ah, kuwaasi oo lagu guuleystay, sidoo kale baarlamanku waxay maal-mariyeen talaabooyin waa weyn oo shaqo.
Prof. Jawaari ayaa yiri ? Waa tallaabo muuqata in 15 guddi? oo kuwa Baarlamanka ah la sameeyey, waxay dar-dar geliyeen howlaha tooska ah ee shaqada Baarlamanka.?
Guddiyada uu sheegay gudoomiyaha Baarlamanka in lagu guulaystay samayntooda,? ayaa waxay yihiin? golayaashii uu ku shaqeyn lahaa Baarlamanku iyo kuwa kale oo gaar ah,? kana kooban maamulka guddiyada Baarlamanka.
? 2012 waxaa lagu guuleystay sameynta iyo meel-arminta xeer hoosaadka Baarlamanka federaalka ah, oo ah kan ilaa hadda ay shaqadu ku kala socoto? ayuu yiri Prof. Maxamed Sheikh Cusmaan oo ka hadlayey waxqabadka baarlamanka.
Docda kale gudoomiyaha Baarlamanka ee Soomaaliya Prof. Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari wuxuu beeniyey in uu jiro is-bedel lagu sameeyey qaar ka mid ah qoddobada dastuurka federaalka ah, wuxuuna wax laga xumaado ku tilmaamay eedaha ay jeedinayaan maamulada dalka iyo qaar ka mid ah Xilibaanada dowladda federaalka ah.
Xillibaanada hadda oo ka kooban 275 mudane ayaa ah kuwii ugu horeeyey ee ay yeelato Soomaaliya oo? Baarlaman rasmi ah tan iyo 1991-dii, wakhtigaasi oo ay meesha ka baxday dowladdii dhexe, waxaana intii ka dambaysay jiray xukuumada federaal ah.